Sida loo Download Crackle Videos
> Resource > Download > Sida loo Download Videos ka Crackle
Crackle, Sony Pictures leedahay Entertainment, waxay siisaa dadka-dhererka buuxa, la qorin, waxyaabaha video ay ku jiraan filimada iyo bandhigyada TV. Adeeg lacag la'aan ah sida ay ku kombiyuutarada iyo kombuyuutarrada gacanta, laga yaabee inaadan xor noqon, maxaa yeelay, waxaad u baahan tahay in ay ku tiirsan internet meel kasta. Waa maxay ka badan, had iyo jeer la kala gooyey laga yaabaa in aad by xayeysiiska dhexe ee filimada aad jeceshahay ama ay muujinayso TV. Mararka kuwan, oo fikirradooda dhici karta in maankiinna soo gala in ay tahay in fikrad cajiib ah inaad kala soo baxdo oo dhan videos crackle iyo wareejiyo qalabka loogu offline loo maqli noqon. Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) waa in waxa aad raadinayso. Waxaa soo bixi kartaa oo aanay u Crackle videos qaababka qalab-friendly inkastoo videos in Crackle waxaa mar kasta qaab flash ah.
Dooro mid ka mid version of barnaamijka si loo soo dajiyo on your computer. Markaasaa waxaa u furo oo na raac si aad u hubiso tutorial faahfaahsan oo ka soo baxay sida soo socota.
1 Raadi video Crackle ku jeclahay
Si videos in la ogaado, fadlan la furo crackle.com mid ka mid ah ugu sareeya 3 daalacashada ku jiraan IE, Firefox iyo Chrome. Markaas maraan si aad u hesho videos aad u jeclahay inaan u ciyaaro.
Marka videos bilaabaan inay ku ciyaaraan, sabayn button Download ku tusi doonaa in dhinaca kore ee midig. Tani waa waxa aad u baahan tahay inaad ogaato. Riix badhanka in la bilaabo ka taxliilin iyo dajinta ee videos ah.
Waxaa jira hab kale oo ay u soo bixi crackle video by url. Copy url video oo riix badhanka URL koollada ku saabsan barnaamijka. Waxaad ku dari kartaa dad badan oo videos in safka dajinta jidka midkood.
3 Beddelaan Crackle videos in qaabab kale
In tab ka soo bixi, heli dhan videos Crackle iyo dhamaan wixii macluumaad aasaasi ah oo iyaga ku saabsan sida size, format iyo in ka badan. U fiirso button badalo on xaq ah? Tani waa diinta videos in qaabab kale. Riix badhanka dooro qaab sida iPad ama kuwa kale sida aad jeceshahay.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad ka heli kartaa videos bixi iyo badaley hal mar ay goobaha qaar ka mid ah. Tag uu furmo suuqa hoose si aad u hesho button toggle of Download badalo ah. Riix badhanka dooro qaab ah in qaabka wax soo saarka horena.
Wax walba waa la haatan sameeyey. Waxaad ku raaxaysan karaan videos ah oo aan wax la dhaafi karin. By habka, waxaad leedahay awood ay ku eegaan wax videos in this downloader Crackle by double-gujinaya videos ah. Si aad u hir maareeyo oo dhan videos ee maktabadda soo bixi, aad jiidi karaan jeedi si ay ula qabsadaan amarka. Ha dambe oo aan la sugi. Sii isku day ah oo aan marnaba gabi doono.